Nepali Christian Bible Study Resources - नम्र दास (भाग २)
» अध्ययन मालाहरू » यूहन्नाको सुसमाचार » यूहन्ना १३
नम्र दास (भाग २)
नम्र दास चेलाहरूका पाउ धुनहुन्छ
यूहन्ना १३ अध्यायमा आइपुग्दा हामी पाउँछौं येशूको मरणको समय अझै नजिक आएको छ। उहाँ “यस ________बाट ______कहाँ जाने आफ्नो घडी आइपुगेको” (यूहन्ना १३:१) छ भनेर येशू जान्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा, यूहन्ना १३ अध्यायमा येशूको मरण हुनभन्दा अघिको रातमा भएका घटनाहरूको बारेमा पढ्छौं। भोलिपल्ट विहानै उहाँ क्रूसमा काँटीले ठोकिनुहुनेछ। भोलिपल्टकै रात उहाँ चिहानमा गाडिनुहुनेछ!
यस अध्यायमा धोकेबाज यहूदाको बारेमा पनि केही कुराहरू सिक्नेछौं जसले प्रभुलाई धोका दिए। यस्तो काम गर्न यहूदाको हृदय र मनलाई कसले प्रभावित पार्‍यो (यूहन्ना १३:२)? ______________।
येशूले यस रात के गर्नुभयो जसको कारण चेलाहरू चकित भए (यूहन्ना १३:४-५)? ____________________________________________। सडकहरूमा धेरै धूलो हुने गरेकोले र मानिसहरूले खुल्ला खाले जुत्ता लगाउने गरेकाले खुट्टा धोइनुपर्थ्यो। प्रायः खाना खाने बेलामा घरका मालिकले आफ्ना पाहुनाहरूलाई पानीको प्रबन्ध गरिदिन्थे। या त पाहुनाहरू आफैले आफ्ना पाउहरू धुन्थे कि त घरका दासहरूले सो गरिदिन्थे। उनीहरूका प्रभु र गुरूले निहुरेर यस्तो तुच्छ काम गर्नुभएको देखेर चेलाहरू छक्क परे। येशूले दासको ठाउँ लिँदै हुनुहुन्थ्यो!
आफ्ना चेलाहरूलाई ख्रीष्टियन जीवन सम्बन्धि र प्रभुसित कसरी सङ्गतिमा हिँड्न सकिन्छ भनेर एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण आत्मिक सत्यता सिकाउनलाई पनि येशूले यसो गर्नुभएको थियो। के पत्रुस येशूद्वारा आफ्नो पाउधोइएको चाहन्थे (यूहन्ना १३:६-८)? ____________। तर येशूले पत्रुसलाई गम्भीर जवाफ दिनुभयो: “मैले तिमीलाई धोइनँ भने मसित तिम्रो केही _______ छैन।” यहाँ “भाग” भन्ने शब्दको तात्पर्य हो, “भागिदार हुनु, साझेदार हुनु, आफ्नो काम र इनामको साझेदार बन्नु”। त्यसैले यसको अर्थ हो, “साझेदार” वा “सङ्गति”। फोहोर पाउभएको चेलासित येशू सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न! प्रभुसित नजिकको सङ्गतिमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंका पाउहरू सफा हुनुपर्छ!
येशूको यो जवाफ सुनेर पत्रुसले भने, “प्रभु, मेरा पाउमात्र होइन, तर मेरा ________ र मेरो _________ पनि (यूहन्ना १३:९)।” पत्रुस तुरुन्तै अर्को विषम पक्षतिर गए! अब पत्रुस पूरै नुहाइन चाहन्छन्—शिरदेखि पाउसम्मै! तर येशूले पत्रुसलाई सम्झाउनुभयो, उसलाई नुहाइन खाँचो छैन, केवल पाउहरू धोइन मात्रै खाँचो छ। “जसले नुहाएको छ, उसलाई ___________ धुनुबाहेक अरू केही खाँचो छैन, तर ऊ पूरा शुद्ध छ; अनि तिमीहरू शुद्ध छौ” (यूहन्ना १३:१०)। यसको मतलब येशू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “पत्रुस, तिमीले स्नान लिइसकेका छौ र तिमी पूरै सफा छौ। तर मसित सङ्गति गर्न सक्न र मसित साझेदार हुन सक्न भने तिम्रो पाउहरू धोइनुपर्छ!”
त्यसबेलाको समयहरूमा एक व्यक्तिले स्नान लिएपछि ऊ धूलैधूलो भएको बाटोमा चप्पल जस्तै खुल्ला खालको जुत्तामा हिँडेकोले आफ्नो गन्तब्य स्थानमा आइपुग्दा ऊ सफा त सफै हुन्थ्यो केवल पाउहरू भने फोहोर हुन्थे।
मुक्तिको घडीमा एक व्यक्तिले पूर्ण रूपमा मुक्तिको स्नान पाउँदछ! परमेश्वरले विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई धुनुहुन्छ र उसलाई सिद्धरूपमा सफा पार्नुहुन्छ! उनका सबै पापहरू क्षमा गरिन्छन (विगतका, वर्तमानका, भविष्यका)। येशूले भन्नुभयो, “तिमीहरू __________ छौ” (यूहन्ना १३:१०)। त्यहाँ एउटै मात्र चेला थियो जो शुद्ध थिएन (यूहन्ना १३:१०-११)। त्यस अशुद्ध र अमुक्त चेलाको नाम के थियो (यूहन्ना १३:११, १३:२ सित दाँज्नुहोस्)? ________________। यहूदा आफ्नो पापमै थियो। उसले मुक्तिको स्नान कहिल्यै पाएको थिएन। ऊ “पानीबाट जन्मेको” थिएन (यूहन्ना १३:५)।
विश्वासी जनले मुक्ति पाएको, क्षमा पाएको र ऊ धोएइएको भए तापनि ऊ ख्रीष्टियन भएर यस संसारमा हिँड्ने क्रममा उसका पाउहरू फोहोर बन्न सम्भव नै छ। कतिबेला विश्वासी जनहरूले दिन दिनै पाप गर्न पनि सक्छन् (१ यूहन्ना १:८,१०)। यसैले नै हो हामीले हाम्रा पापहरू _____________ गर्नुपर्छ (१ यूहन्ना १:९) ता कि हाम्रा पाउहरू सफा रहून्। मुक्ति पाउनलाई भनेर हामीले हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्ने त होइन। पत्रुसलाई स्नानको खाँचो थिएन! परमेश्वरले विश्वासी जनलाई मुक्त गरिसक्नुभयो (उसलाई पूरै सफा पारिसक्नुभयो)। तर प्रभुसित नजिकको सङ्गतिमा हिँड्न विश्वासी जनले आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। विश्वासी जनका पाउहरू सफा हुन खाँचो छ (यूहन्ना १३:८, दाँज्नुहोस् यशैया ५९:१,२)।
के तपाईंले मुक्तिको स्नान पाउनुभयो? के तपाईंका सबै पापहरू क्षमा भए (पढ्नुहोस्, एफेसी १:७ र प्रेरित १०:४३)? तपाईं साँच्ची नै ख्रीष्टियन हुनुहुन्छ भने के तपाईंले आफ्ना पाउहरूलाई दिन प्रति दिन सफा राख्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं १ यूहन्ना १:९ ले भने अनुसार गर्नुहुन्छ? १ यूहन्ना १:९ ले के भन्दछ सो जान्नु एउटा कुरा हो तर १ यूहन्ना १:९ अनुसार गर्नु त्यो अर्कै कुरा हो! येशूले भन्नुभयो, “तिमीहरू यी कुराहरू जान्दछौ भने र यी कुराहरू गर्दछौ भने तिमीहरू धन्यका हौ (यूहन्ना १३:१७)।” त्यो विश्वासी सुखी हो जसले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्छ र त्यो पनि तुरुन्तै गर्छ! आफ्ना पाउहरूमा फोहोरलाई धेरै बेरसम्म टाँस्सिरहन नदिनुहोस्!
यूहन्ना १३:१२-१६ मा येशूले चेलाहरूलाई आफ्नो नमूना पछ्याउनलाई भन्नुभयो। उहाँले आफूलाई नम्र पार्नुभयो र उनीहरूको पाउधोएर सेवा गर्नुभयो। तिनीहरूले पनि आफूलाई नम्र पार्नुपर्छ र अरूको सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा महान् त्यो हो जो सबैको ___________ हुन्छ (मर्कूस १०:४४)। आउने हप्ता तपाईंले अरूहरूको सेवा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केही उपायहरू सोच्न सक्नुहुन्छ?
नम्र दास आफूलाई यहूदाद्वारा पक्राइने भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ
आफूलाई के हुनेछ भनी येशू एक-एक जान्नुहुन्थ्यो। यहूदाको काम उहाँको लागि कुनै अप्रत्याशित कुरो थिएन। त्यो हुनुभन्दा अगाडिबाटै येशूले त्यसको भविष्यवाणी गर्न सक्नुभयो: “अब यो हुनुभन्दा ___________ म तिमीहरूलाई भन्दछु, र जब यो हुन आउला, तब म उही रहेछु भनी तिमीहरूले विश्वास गर्न सक” (यूहन्ना १३:१९)। हामीले पहिला पनि देख्यौं, उहाँलाई __________ले हुनेछ भनी येशू शुरूबाटै जान्नुहुन्थ्यो (यूहन्ना ६:६४)।
सामान्यतया टेबलमा हामीसँगै खाने व्यक्तिहरू हाम्रा मित्रहरू नै हुन्छन्। तर उहाँको टेबलमा एउटा शत्रु थियो भनी प्रभु जान्नुहुन्थ्यो (पढ्नुहोस्, यूहन्ना १३:१८)। यहूदा ख्रीष्टको पक्षमा होइन बिरुद्धमा थियो!
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई के भन्नुभयो (यूहन्ना १३:२१)? ____________________ ________________________________________________________________। उहाँलाई पक्राउने व्यक्तिले होला भनी के चेलाहरूले जान्दथे (यूहन्ना १३:२२, दाँज्नुहोस् मत्ती २६:२१-२२)? _________________। “त्यो त पक्कै पनि बदमाश यहूदा नै हुनुपर्छ!” भनेर चेलाहरूले भनेनन्। होइन, यहूदाले उनीहरू सबैलाई छल गरेका थिए! यहाँसम्म कि उनीहरूले पैसाको थैलीको जिम्मा समेत उसैलाई दिएका थिए (यूहन्ना १२:६)!
प्रेरित यूहन्ना “येशूले प्रेम गर्नुभएको चेला” भनी चिनिन्छन्। उनको बारेमा हामी यूहन्ना १३:२३ मा सिक्छौं (याद राख्‍नुहोस्, यो सुसमाचारको पुस्तक लेख्‍ने उनी नै हुन्!)। यूहन्ना येशूको छातीमा टाँस्सिएर बसिरहेका थिए। त्यसबेलाका समयहरूमा आजजस्तो टेबुल वरिपरि कुर्सीहरूमा बस्ने चलन थिएन। बरु उनीहरू पलङजस्तै बस्ने कुरामा पस्रिएर बस्थे, र देब्रे कुहीनामा टेकेर दाहिने हातले खान्थे। यसर्थ उनीहरू एकातिर कोल्टे परेका हुन्थे। शिरचाहिँ टेबिलको नजिक पुगेको हुन्थ्यो भने पाउहहरू टेबिलको परतिर पुगेका हुन्थे। दाहिने पट्टिको व्यक्तिको शिर उनको देब्रेपट्टिको व्यक्तिको छातीको नजिक पुगेको हुन्थ्यो। यसर्थ यूहन्ना येशूको दाहिनेपट्टि थिए।
प्रभुको सबभन्दा नजिकमा कसरी रहने भनेर अरू चेलाहरूले भन्दा यूहन्नाले नै जानेको देखिन्छ। गोठाला र उनका भेडाहरूको विचार गरौं। गोठालाले आफ्ना सबै भेडाहरूलाई माया गर्छन् तर कुनै भेडाहरू अरू भेडाहरूभन्दा गोठालो नजिकमा रहन्छन्।कोही भेडा गोठालाकै छैउमै हिँड्छन्। सानो पाठो छ भने गोठालाले निहुरेर त्यसलाई आफ्नो अँगालोमा समेत बोक्न सक्छन्। यूहन्ना आफ्नो प्रभुको नजिक रहन जानेका चेला थिए। हामी साँच्ची नै उहाँका भेडाहरू हौं भने (यूहन्ना १०:२६-२७) ख्रीष्टियन जीवनमा हाम्रो जिम्मेवारी हो गोठालो सकेसम्म नजिक रहनु! उहाँबाट तर्किएर नजानुहोस्!
यूहन्ना येशूको नजिकमा भएको हुनाले पत्रुसले यूहन्नालाई एक खालको इशारा गरे। पक्राउने व्यक्तिले हो त्यो यूहन्नाले येशूलाई सोधून् भन्ने पत्रुसको इच्छा थियो। तब यूहन्नाले प्रश्न गरे, “प्रभु, _____________________” (यूहन्ना १३:२५)?
त्यसबेलाका समयहरूमा चम्चा काँटाको चलन थिएन। प्राय नेपालमा जस्तै खानलाई हात नै प्रयोग गरिन्थ्यो। एउटा टुक्रा रोटी लिएर अरू झोल पद्धार्थको खानेकुरामा चोपेर खाइन्थ्यो। येशूले रोटीको टुक्रा लिनुभयो, चोप्नुभयो र कसलाई दिनुभयो (यूहन्ना १३:२६)? _________________। चिन्ह यही नै थियो! पक्राउने व्यक्ति यहूदा नै हो!
यहूदाले टुक्रा लिएपछि उसलाई के भयो (यूहन्ना १३:२७)? ____________________ ___________________________________। दुष्ट आत्माले बास गरिनु अति नराम्रो हो तर यहूदा त शैतानले नै बास गरियो! यहूदाले आफैलाई शैतानको हतियार बन्न सुम्पियो र उसले संसारकै महा अपराध पूरा गर्न अब अगाडि बढ्यो!
यहूदा कोठाबाट किन निस्केर गयो भन्ने कुरा अरू चेलाहरूले खासै बुझेनन् (यूहन्ना १३:२७-२८)। उनीहरूमध्ये कतिले, ऊ निस्केर जानुको कारण के थियो भनेर सोचे (यूहन्ना १३:२९)? _____________________ _______________________________________। यहूदा के गर्न लाग्दैछन् भन्ने कुरा के येशूलाई थाहा थियो? _________________।
यहूदा निस्केर गएपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा ___________ आज्ञा दिनुभयो (यूहन्ना १३:३४)। पुरानो आज्ञा यो थियो, “आफ्नो छिमेकीलाई _________लाई झैं प्रेम गर” (लेवी १९:१८)। नयाँ आज्ञाले पनि आफ्नो छिमेकी अर्थात् एकअर्कालाई प्रेम गर्न भन्छ तर नयाँ आज्ञामा कुन कुरा फरक छ भने त्यो चाहिँ “जसरी” भन्ने शब्दपछि उल्लेख छ। येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, “जसरी _______ तिमीहरूलाई ________ गरेको छु, उसरी नै तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई प्रेम गर (यूहन्ना १३:३४)।” तिनीहरूले ख्रीष्टले जसरी प्रेम गर्नुपर्थ्यो! यदि चेलाहरूले “प्रभु तपाईंले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभएको छ?” भनेर सोधेका भए येशूले मानौं जवाफ दिनुहुनेथियो, “भोलि म क्रूसमा जाँदै छु अनि तिमीहरूका लागि मेरो प्रेम कस्तो छ त्यो देख्‍नेछौ!” कल्वरी प्रेम भन्दा ठूलो प्रेम कुनै छैन! साँच्ची हामी प्रेम गर्न सिक्न चाहन्छौं भने हामीले क्रूसमा हेर्नुपर्छ किनकि त्यहीँ नै हो जहाँ हामी परमेश्वरको प्रेमलाई देख्दछौं (रोमी ५:८, एफिसी ५:२,२५)। साँचो ख्रीष्टियनहरूको चिनो पनि यस्तै खालको प्रेम नै हुनुपर्छ (यूहन्ना १३:३५)! जब कसैले आफूलाई अर्काको निम्ति, उसको वास्तविक खाँचो पूरा गर्नलाई, जस्तैसुकै व्यक्तिगत बलिदानको खाँचो परे तापनि त्यस व्यक्तिको उच्चतम भलाइ चाहँदै उसलाई दिनलाई निर्णय गर्छ तब उसले ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गरिरहेको हुन्छ। हाम्रा मुक्तिदाताले देखाउनुभएको प्रेम यही खालको प्रेम हो (यूहन्ना ३:१६)!
नम्र दास आफू पत्रुसद्वारा इन्कार गरिने कुराको भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ
येशू, यहूदाको बारेमा मात्र होइन पत्रुसको बारेमा पनि सब जान्नुहुन्थ्यो! बलियो आत्मविश्वास बोकेका पत्रुस येशूलाई जतासुकै पछ्याउनेछु भन्ने कुरामा पक्का थिए। उनेल येशूले यहाँसम्म भने, “म तपाईंका लागि आफ्नो __________ अर्पण गर्नेछु” (यूहनना १३:२७)। पत्रुसले राम्रै सोचेका हुन् तर आफू कति कमजोर छु उनी जान्दैनथे। पत्रुस आफूले गर्छु भनेको कुरा पूरा गर्न नसक्ने मात्र होइन उसले प्रभुलाई _________ पटक इन्कार गर्नेवाला थिए (यून्ना १३:२८)। येशू हाम्रा सबै कमजोरी जान्नुहुन्छ। हामी लड्छौं भनी उहाँ जान्नुहुन्छ।
ख्रीष्टियन भएर हामी आत्माविश्वासदेखि होशियार हुनुपर्छ किनकि उहाँले भन्नुभयो “_____ बाट अलग भएर तिमीहरूले ________ ________ गर्न सक्दैनौ (यूहन्ना १५:५)। हामीलाई आत्माविश्वास होइन ख्रीष्ट-केन्द्रित-विश्वासको खाँचो छ ता कि हामी भन्न सकौं, “मलाई शक्ति दिनुहुने ___________द्वारा म _______ कुराहरू गर्न सक्छु” (फिलिप्पी ४:१३)।
उहाँबिना हामी निश्चय लड्छौं!
तर, उहाँद्वारा निश्चय विजयी बन्छौं!
« नम्र दास (भाग १)
बिदाइ हुनुहुने व्यक्ति (भाग १) »